शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ कहिल्यै पनि नहाटाउनुस् ! – List Khabar
Home / समाचार / शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ कहिल्यै पनि नहाटाउनुस् !
शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ कहिल्यै पनि नहाटाउनुस् !
admin October 31, 2021 समाचार Leaveacomment 112 Views
काखीका रौं– काखीका रौं हटाउने चलन बढेर गएको छ । केटीहरुले त काखीको रौं देखाउन मन नै पराउँदैनन् । काखीमा रौं बाट नामक तत्व निस्किन्छ जसले तपाइँको एक प्रकारको गन्ध आउँछ ।यसले विपरित लिङ्गीलाई आकर्षित गर्ने समेत मानिन्छ । छातीको रौं पनि निमिट्यान्न पार्नु भन्दा पसिना नआउने गरी राखेको राम्रो मानिएको छ ।
छातीको रौं– उमेर बढ्दै जाँदा पुरुषको छातीमा रौं बढ्दै जान्छन् । पुरुषको शरीरमा हुने हर्मोनका कारण रौं बढ्ने गर्छ । यसको यदि कुनै पुरुषको छातीमा रौं छैन भने यो हर्मोनको कमी भन्ने बुझिन्छ ।तर छातीमा रौं नहुनु अस्वस्थ हुनुको लक्षण भने होइन । पुरुषको छातीमा हुने रौं नकाट्नु राम्रो मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा छातीका रौं काट्दा अस्वस्थ हुने ख तरा समेत हुन्छ ।
Previous छालामा एलर्जी भयो ? नआत्तिनुहोस् तपाइँको घरमै छन् ओखती , गर्नुहोस् यस्तो कार्य
Next तपाईलाई यौनमा के मन प्रछ भन्ने प्रश्नमा मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ (भिडियोसहित)